▪ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း အာတိတ်ဒေသရေခဲများသည် “ဂြိုဟ်တုဖြင့် တိုင်းတာချိန်မှစ၍ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ ကျုံ့သွားသည်။” စတုရန်းမိုင် ၁.၆၅ သန်းရှိသော ရေခဲပြင်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ် မှတ်တမ်းထက် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားသည်။—NATIONAL SNOW AND ICE DATA CENTER, အမေရိကန်။
▪ နိုင်ငံသား ၁၀၀ ဦးလျှင် သေနတ်အလက် ၉၀ ရှိသော အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လက်နက်အများဆုံးရှိသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ “အရပ်သားလက်နက်ကိုင်ဆောင်မှု ဒုတိယအများဆုံး” နိုင်ငံမှာ အိန္ဒိယဖြစ်ပြီး “လူ ၁၀၀ လျှင် သေနတ် ၄ လက်ဖြစ်သည်။—TIME, အမေရိကန်။
▪ အမေရိကန်၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ မီယာမီမြို့တွင် ရက်သတ္တပတ် ၂၁ ပတ်နှင့် ၆ ရက်ဖြင့်မွေးလာပြီး အလေးချိန် ၁၀ အောင်စအောက်သာရှိသော ကလေးတစ်ဦးသည် “လမစေ့ဘဲ မွေးဖွားလာသည့် အသက်ရှင်သောကလေးများ၏စံချိန်ကို ချိုးလိုက်သည့် ကလေးဖြစ်နိုင်သည်။” “ရက်သတ္တပတ် ၂၃ ပတ်မပြည့်ဘဲ ၁၄.၁၁ အောင်စ (၄၀၀ ဂရမ်) အောက် မွေးလာသောကလေးများသည် အသက်မရှင်နိုင်ဟု ယူဆထားကြ၏။”—ရိုက်တာသတင်းဌာန၊ အမေရိကန်။
အစ်ဂျီးယန်းပင်လယ်ရှိ ကျွန်းများတွင် ရေရှားပါးမှုကို ဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်းရာ၌ ဂရိသိပ္ပံပညာရှင်များသည် “ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေဘဲ ပင်လယ်ရေကို ရေချိုဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသော စက်ယန္တရားတပ်ဆင်ထားသည့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိက ရေပေါ်စင်” ကိုတည်ဆောက်လိုက်သည်ဟု အေသင်သတင်းဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ လေရဟတ်များနှင့် နေစွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် နေရောင်ခြည်ခံဆဲလ်ပြားများ ထောင်ထားသောစင်မှ လူ ၃၀၀ ခန့်အတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်သောရေကို သန့်စင်ပေးနိုင်သည်။ ဤစနစ်သည် ဆိုးဝါးသော ရာသီဥတုအခြေအနေများအောက်တွင် အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ပြီး အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ကာ အလိုရှိသောနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်။
ရှေးဟောင်းအရိုးစုများ တွေ့ ရှိခြင်း
“ဆိုက်ဘေးရီးယား၏ မြောက်ပိုင်းအကျဆုံးနေရာတွင် . . . အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရေခဲပြင်များအရည်ပျော်ကာ ရှေးဆင်ကြီးများ၊ အမွေးရှည်ကြံ့များနှင့် ကျားများ စသည့် ရှေးဦးတိရစ္ဆာန်တို့၏ အရိုးစုများ ပေါ်လာသည်” ဟု ရုရှားနိုင်ငံ၊ ချာစကီစာခါမှ ရိုက်တာသတင်းဌာနကဆို၏။ စုဆောင်းသူများနှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည် ကောင်းမွန်သော ရုပ်ကြွင်းနမူနာများအတွက် ငွေအမြောက်အမြားပေးလိုကြသောကြောင့် ရှာဖွေသူများသည် ဒေသခံလူတို့၏အကူအညီဖြင့် အဖိုးတန်ရာများကို ထိုရေခဲပြင်ဒေသတွင် သဲသဲမဲမဲရှာဖွေလျက်ရှိကြသည်။ “အချို့ဒေသများတွင် ရေခဲပြင်အရည်ပျော်၍ အက်ကွဲမှုများမှာ မြန်ဆန်လှသောကြောင့် မီတာအနည်းငယ်တိုင်းတွင် အရိုးစုများမှာ မြေကြီးထဲမှ ထိုးထွက်လျက်ရှိသည်” ဟုအဆိုပါသတင်းကဆို၏။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အထိ ဆွီဒင်အကောက်ခွန်အရာရှိများသည် မှောင်ခိုသမားများထံမှ ဖမ်းဆီးရမိသော အရက်များကို “သွန်ပစ်လေ့ရှိကြသည်။” ယခုအခါတွင်မူ မှောင်ခိုအရက်များသည် “တိုင်းပြည်၏ လူထုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အတွက် အထောက်အကူပြုလျက်” ရှိသည်ဟု စတော့ဟုမ်းမှ အေပီသတင်းတစ်ပုဒ်ကဆို၏။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိသော အရက်ဂါလံပေါင်း ၁၈၅,၀၀၀ ကို ဘိုင်အိုဒီဇယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲကာ “ဘတ်စကားများ၊ ထရပ်ကားများနှင့် ရထားတစ်စင်းအတွက် လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။” ဤလောင်စာသည် “အကျိုးအမြတ်ရှိသော စီးပွားရေးဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ကုန်ကြမ်းကို အခမဲ့ရရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏” ဟုအဆိုပါသတင်းကဆိုသည်။ ထို့ပြင် ယင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဆွီဒင်၏ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင် လျှော့ချမှုတွင်လည်း အထောက်အကူပြုသည်။
“အီးမေးလ်၊ စာဖြင့်သတင်းပို့ခြင်းနှင့် အိုင်ပေါ့စ် (iPods) တို့သည် လူတို့အား ပို၍ အရှက်အကြောက်ကြီးလာစေသည်” ဟု ဩစတြေးလျသတင်းစာတစ်စောင် (Sunday Telegraph) ကဆိုသည်။ စိတ်ပညာရှင်နှင့် သုတေသီဖြစ်သူ ရော်ဘင် အေဗရာဟင်အဆိုအရ ယခုအခါ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင် အရှက်အကြောက်ကြီးခြင်းသည် ယခင်ကထက်ပိုများလာကာ လူဦးရေထက်ဝက်ခန့်ကို ထိခိုက်လျက်ရှိသည်။ “နည်းပညာက ကျွန်တော်တို့ကို ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကနေ ရှောင်လွှဲစေနိုင်ပြီး လူတွေနဲ့ သီးခြားဖြစ်စေတယ်။ လူတွေဟာ . . . စကားပြောဆိုမယ့်အစား အီးမေးလ် ဒါမှမဟုတ် စာနဲ့သတင်းပို့ကြတယ်” ဟု အေဗရာဟင်ကဆိုသည်။
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ နိုးလော့! ဇွန် ၂၀၀၈